Esi ọcha na oghere na iPad na iPhone mfe | Akụkọ akụrụngwa
Olee otú ọcha ohere na iPad mfe
Mmanya na-egbu egbu | | Mobiles
Site a ole na ole Atụmatụ na usoro anyị ga-enwe ga-ekwe omume oghere doro anya na iPad, ihe nwere ike ịbụ ihe dị mkpa n'ihi eziokwu ahụ bụ na ụdị ụfọdụ ejirila nke ukwuu belata nchekwa. Ikekwe a na-ebulite mkpa a maka ndị nwetara 16 GB ụdị, bụrụ oge dị oke egwu onye ọrụ a ga-agabiga ma ọ bụrụ na ha amaghị etu esi ewepụta ohere.
Anyị ga-ekwusi ike na ọ bụrụ na anyị akwadoro ịkụziri otu esi aga n'ihu na-ehicha ohere na iPad, ọ bụ n'ihi na ngwaọrụ ndị a nwere sistemụ arụmọrụ ebe o siri ike imeghe windo nyocha faịlụ dị ka anyị na Windows, ebe ọ bụ na na nke ikpeazụ ọrụ ahụ dị mfe ebe ọ bụ na mkpochapu ụdị ozi ọ bụla ejedebeghị na inyocha ọnọdụ ole na ole ma kpochapụ ihe anyị enweghịzi mmasị ịnọ ebe ahụ.
1 Ndụmọdụ iji hichapụ faịlụ ma hichaa ohere na iPad
2 Ihichapu oghere nke ụfọdụ ngwa na iPad
Ndụmọdụ iji hichapụ faịlụ ma hichaa ohere na iPad
Otu n'ime ihe mbụ anyị nwere ike ịkwado ugbu a bụ na onye ọrụ gbalịrị Nyochaa onye ọ bụla nke na ngwa ị rụnyere na iPad; Naanị ịga na desktọọpụ, ị ga-enwe ike ịhụ ngwa ndị bụ ndị ị na-anaghị eji ugboro ugboro, ndị a bụ ndị ị ga-ebu ụzọ wepụ ma ọ bụ wepụ. Iji mezuo nke a, naanị anyị ga-pịa ma jide akara ngosi nke ngwa a kapịrị ọnụ, n'oge ọ bụla obere (x) ga-apụta na anyị ga-ahọrọ na ngwa ọrụ ahụ anyị achọghịzi inwe. Ozugbo ọ ga-ehichapụ gị niile mmasị. Naanị ihe anyị ga-eme bụ ịpị bọtịnụ Home ka ngwa ahụ laghachi n'ọnọdụ ha.
Na mbụ anyị kwesịrị ịlele nke bụ oghere anyị ji na nke bụ free n'ime anyị iPad; Iji mee nke a, anyị ga-aga:
Chọta nhọrọ nke General.
Nanyagharịa na ala iji họrọ Jiri.
N'oge a ngwa niile nke awụnyere na iPad ga-apụta, igosi oghere nke onye ọ bụla n’ime ha na-eri.
Anyị ga-emetụ onye anyị na-achọghị aka ka ọ bụrụ na bọtịnụ ọbara ọbara pụtara nke na-ekwu «Hichapụ Ngwa".
Ọ bụrụ na ị attentionaa ntị na ihuenyo a nke anyị nọrọ, ebe a nwekwara akụkụ ole na ole bara uru iburu n'uche. Ngwa anyị ahọrọla dịka ọmụmaatụ nwere naanị 96,9 MB, ịbụ 524 MB ndị na-etinye data nke otu. Ọ bụrụ na anyị chọrọ idobe ngwa ahụ (na nke a, egwuregwu) anyị nwere ike họrọ "akwụkwọ na data" ihichapụ naanị ndị a faịlụ ma si otú ọcha ohere na iPad na anyị ga-eji maka ndị ọzọ ihe aga-eme.
Ihichapu oghere nke ụfọdụ ngwa na iPad
Ihe anyị na-atụ aro n'elu nwere ike ịme maka ngwa ọ bụla anyị rụnyere na iPad anyị, enwekwara usoro yiri ya nke anyị nwere ike ịchọ ịma n'oge chebe nzuzo na ịntanetị. Dị ka anyị maara nke ọma, Safari bụ ihe nchọgharị ndabara nke arụnyere na sistemụ arụmọrụ iPad na iPhone, ngwá ọrụ na-echekwa ụfọdụ faịlụ ndị emepụtara mgbe anyị nyochara weebụ.
N'ime ohuru General (na Jiri) taabụ anyị ga-achọta Safari, nke a iji lelee ihe nnabata (na ole) ihe nchọgharị n'ime ngwaọrụ mkpanaka anyị.
Ihe onyonyo nke anyi tinyebere na akuku elu na egosiputa anyi ihe omuma ya na data nke weebụsaịtị nke anyi nyochara, ihe na-adighi eri oke ohere na iPad ma mana, anyi nwere ike iru ihichapụ ma ọ bụrụ na anyị achọghị ka ozi a nọrọ ebe a na ngwaọrụ mkpanaaka
Anyị nwekwara ike ihichapụ oghere nke ngwa ọ bụla ọzọ, na-ewere QuickOffice dịka ọmụmaatụ; naanị ihe anyị kwesịrị ime bụ ịgba ọsọ maka ọfịs a wee mechaa, họta mkpụkpu phẹ nke dị n’akụkụ aka nri elu.
Mpio nhazi ga-apụta ozugbo, ebe anyị ga-enweworị ohere ị ga-enwe ịghọta ohere na iPad nke oghere faịlụ na-erepịa. N'ebe ahụ, anyị nwere mmasị na ọ bụ 100 MB, na-enwe ike iwepụ ya naanị site na imetụ nhọrọ ahụ.
Ihe niile anyị kwadoro iji hichaa ohere na iPad na-arụkwa ọrụ maka anyị ma ọ bụrụ na anyị nwere iPhone, ebe ọ bụ na sistemụ arụmọrụ nke ngwaọrụ mkpanaka ahụ bụ otu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Olee otú ọcha ohere na iPad mfe
Etu esi tinye onyinye na Twitter